Izitayela zasehlobo: isikhathi sokukhipha izikhindi zakho ekhabethe | Bezzia
UMaria vazquez | 07/06/2021 10:00 | Ngigqokani
Konke kukhombisa ukuthi kuleli sonto sizokwazi ukujabulela isikhathi sasehlobo, yize ngokusemthethweni ngeke singene kule sizini kuze kube nguJuni 21 olandelayo. Isikhathi sokususa, ngakho-ke, i- izikhindi noma izikhindi, ukwakha izitayela ezifana nalezi esabelana ngazo namuhla.
Izikhindi ziyi- ingubo ehlotshaniswa nehlobo, yize kukhona nalabo abazigqoka ebusika. Ingubo ephelele yokujabulela izinsuku ezishisa kakhulu ezihlanganiswe namahembe, ama-blouses noma amahembe nezimbadada noma amahembe. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi bakwenza kanjani?
Njengenjwayelo, njalo ngoMsombuluko sisebenzise ama-akhawunti wabantu abahlukahlukene be-instagrammers ukwabelana nawe ngeziyisishiyagalolunye. Izingubo eziyisishiyagalolunye zasehlobo nge-denominator eyodwa ejwayelekile: zonke zifaka izikhindi noma izikhindi.
Singazazisa izitayela ezahlukahlukene uma sibheka kulolu hlobo lwamabhulukwe. Ama-denim shorts asengenye yezinto ezithandwa kakhulu lapho kufika ihlobo, kodwa-ke, kulo nyaka i- izikhindi eziphakeme ezinqeni yakhiwe izindwangu ezikhanyayo ezifana nelineni. Okuhamba phambili, ngaphandle kokungabaza, ukubhekana nezinsuku ezishisa kakhulu.
Uma sibheka izinketho ezahlukahlukene zokuzihlanganisa, kufanele futhi sikhulume ngamathrendi amabili. Owokuqala, wokhuthazo oluncane, usimema ukuba sihlanganise nabo Izikibha eziyisisekelo noma amahembe amhlophe noma mnyama bese uqedela ukubukeka ngezimbadada eziyisicaba noma izikibha ukuze uthole induduzo enkulu.
Umkhuba wesibili usikhuthaza ukuthi sihlanganise izikhindi kanye amahembe aphefumulelwe ama-boho noma ama-blouses. Zingaba amahembe anembali ephrintiwe kanye / noma enemininingwane yemfashini enjengezintambo, ama-ruffles noma imikhono ekhukhumele. Ukuqedela ukubukeka kwakho, uzodinga kuphela izimbadada eziphansi noma eziphakathi nendawo, lezo ozizwa ukhululekile kakhulu kuzo, nezinsimbi ze-raffia.
Ngabe ujwayele ukugqoka izikhindi ehlobo? Noma ukhetha ukugqoka iziketi noma izingubo uma ufuna ukufushane?
Izithombe - @mzokoloko, @sbahle_mpisane, @sbahle_mpisane, @tsangtastic, @sibusisomakhathini, @syabongampungos, @lionseb, @nonhlanhla_Nox
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » Izitayela zasehlobo: isikhathi sokukhipha izikhindi zakho ekhabethe